Tag: amniga | Martech Zone
Mid ka mid ah qoraalladii ugu caansanaa ee aan wadaagnay sanadkan ayaa ahaa boggayaga dhammaystiran ee qormooyinka liistada hubinta. Infograafigani waa dabagal la yaab leh oo ay sameysay hay'ad kale oo weyn oo soo saarta macluumaad aan caadi aheyn, Xayeysiinta MDG. Waa kuwee websaydhka elektaroonigga ah ee muhiimka u ah macaamiisha? Maxay tahay in magacyadu ay xoogga saaraan waqtiga, tamarta, iyo miisaaniyadda hagaajinta? Si aan u ogaanno, waxaan eegnay tiro badan oo sahanno dhow ah, warbixinno cilmi baaris ah, iyo waraaqaha tacliinta. Falanqayntaas, waxaan ka helnay taas
Toddobaadkii la soo dhaafay, waxaan isku dayeynay inaan ku iibsanno lambarka sirta ah ee koontada Youtube ee macaamiisha. Ma jiraan wax ka sii daraya oo ku luminaya qof walba waqtigiisa oo aan ahayn tan tan. Dhibaatadu waxay ahayd in shaqaale kaligiis maareeyay koontada si lama filaan ah uga tagay shirkadda - oo aan ku xirnayn shuruudaha ugu fiican. Waxaan ku dadaalnay sida dhexdhexaadiye ah inaan isku dayno inaan soo helno lambarka sirta ah, laakiin waxay yiraahdeen ma garanayaan waxa ay ahayd hadda. Ee